प्रज्वलित ढाँचा, के प्रारूपहरू किन्डलले पढ्छ? पत्ता लगाउनू! | सबै ईरेडरहरू
जोआक्विन गार्सिया | | अमेजन Kindle, ई-पुस्तकहरु, ईरेडरहरू
एउटा e-book एक डिजिटल फाइल हो जुन पुस्तक वा प्रकाशन शीर्षक समावेश गर्दछ। यसलाई सामान्यतया इबुक भनिन्छ, यो नाम अंग्रेजी शब्द इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकबाट आउँदछ। सुरुमा, इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू पढ्न सक्षम उपकरणहरू ईबुक शब्दसँग भ्रममा परेका थिए र यदि हामी यसमा ईबुक ढाँचा वरिपरि परिवर्णी शब्दहरूको हिमपहिरो थप्यौं भने, भ्रम स्पष्ट छ। अहिले, थोरै मानिसहरूलाई ठ्याक्कै थाहा छ सीजुन किन्डलसँग मिल्दो ढाँचाहरू हो, एउटा ई-बुक रिडर जुन धेरैले विचार गर्छन् सर्वश्रेष्ठ eReader.
सबै ई-बुक पाठकहरू उही ढाँचाहरू पढ्न सक्षम छैनन्सामान्यतया, प्रत्येक उत्पादकले प्राय: एक वा दुई आफ्नै स्वरूपहरू साथै अधिक सामान्य ढाँचाहरू समावेश गर्दछ जुन स्वतन्त्र छैन। ढाँचाको यो दोस्रो वर्ग भित्र, Epub अलग देखिन्छ, जो नि: शुल्क ebook ढाँचा, txt, pdf वा कागजात कागजात हो। पहिलो प्रकारका ढाँचाहरूको सम्बन्धमा, स्वामित्व ढाँचाहरू जुन ठूला निर्माताहरूले समावेश गर्दछ, यो सामान्यतया कम्पनीमा निर्भर हुन्छ, तर सबै तिनीहरू Epip ढाँचाबाट लिन्छन् जुन उनीहरू परिमार्जन गर्छन्। यस सबैको नकारात्मक पक्ष यो हो कि यदि हामी पुस्तक पसलबाट ईबुक खरीद गर्छौं, हामीसँग स्वतन्त्र ढाँचा नभएसम्म, हामी यसलाई अर्को पुस्तक पसलबाट पाठकमा पढ्न सक्षम हुनेछैनौं।
यी कमजोरीहरू प्राय: अमेजनको मामलामा स्पष्ट देखिन्छन्, जसका पाठकहरू, दलाल, तिनीहरूले केवल ईबुक्सको निश्चित संख्या पढ्दछन्, जस मध्ये, चार ढाँचाहरू अमेजनका हुन्। यी ढाँचाहरू हुन् किन्डल फर्म्याट,, किन्डल फर्म्याट,, मोबी ढाँचा र prc ढाँचा। यी स्वरूपहरू या त अपडेटहरू हुन् जस्तै मोबी वा किन्डल फर्म्याट or वा तिनीहरूले मानक लिन्छन्, इपब ढाँचा यी स्वरूपहरू सिर्जनाको लागि आधारको रूपमा। पछिल्लोको राम्रो उदाहरण किन्डल फर्म्याट would हुनेछ। तर यी ढाँचाहरूलाई नियाले हेरौं।
1 किन्डल फर्म्याट or वा AZW को रूपमा पनि चिनिन्छ
2 किन्डल फर्म्याट or वा AZW8
3 किन्डल मोबी ढाँचा
5 किन्डल फायरले पढ्न सक्ने ईबुक स्वरूपहरू
किन्डल फर्म्याट or वा AZW को रूपमा पनि चिनिन्छ
यो किन्डल ढाँचा मोबी ढाँचाको सुधारिएको संस्करण हो। २०० 2008 मा, अमेजनले कम्पनी मोबिपकेट खरीद गर्यो र यसको साथ सबै कम्पनीको प्याटेन्टहरू र उत्पादनहरू। यो धेरै थिएन तर उनीहरूसँग अमेजनले सबैभन्दा धेरै कदर गरे, ईबुक स्वरूपका लागि प्याटेन्टहरू, विशेष रूपमा मोबी ढाँचा। को मोबी ढाँचाले ओपनबुक नियमहरू पालना गर्ने प्रयास गर्दछ, प्रारूप जुन xML वेब मानक मा आधारित छ। खरीद पछि, अमेजनले सबै नियमहरू र यसका सञ्चालनलाई आदर गर्दै यसको ढाँचा लिए, र आफ्नै डीआरएम, एक सफ्टवेयर प्रस्तुत गर्‍यो जुन ईबुकको व्यावसायीकरणको लागि निश्चित खाता वा उपकरणमा ईबुकको उपयोग प्रतिबन्धित गर्दछ। किन्डल फर्म्याट7वा AZW जन्म भएको थियो।
समय बित्दै जाँदा, अमेजन ईआरिडर्सको विकास भयो र तिनीहरूसँग खेल्ने सफ्टवेयर र ढाँचाहरू, यो हामी कसरी प्रयाप्त ढाँचा see देख्न सक्छौं।
किन्डल फर्म्याट or वा AZW8
यो किन्डल फर्म्याट of को विकास हो, यसमा मोबी ढाँचा र ड्रम सहितको तह समावेश थिएन तर यो अरू कुरा हो। किन्डल फर्म्याट or वा AZW8 एक ebook हो जुन EPUB3 मानक अनुसरण गर्दछ, जसमा उनीहरूले ड्रम समावेश गर्दछ र AZW वा किन्डल फर्म्याट format ढाँचामा फाईलमा पनि जोडिएको छ ता कि यो पुरानो ढाँचा पढ्ने उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ। जब मोबी ढाँचा र किन्डल फर्म्याट were सिर्जना गरिएको थियो, इपब ढाँचाको मानकीकरण अझै पनी असुविधाजनक र केही भ्रमपूर्ण थियो, त्यसैले अमेजनले AZW7 को आगमन सम्म यो ढाँचासँग हिम्मत गरेन। AZW7 ले HTML3 को पावर यसको पूर्ण हदमा प्रयोग गर्दैन किनकि केहि नयाँ ट्यागले उनीहरूलाई समर्थन गर्दैन र केही जुन अप्रचलित हुन्छ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न जारी राख्छ। थप रूपमा, CSS3 मानक पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन, केहि तत्वहरू जस्तै निश्चित पृष्ठभूमि लेयर CSS5 सँग मिल्दैन।
किन्डल मोबी ढाँचा
यी किन्डल फर्म्याटको साथ, किन्डल ई आरिडर्सले मोबी ढाँचालाई पनि समर्थन गर्दछ, यद्यपि यसले अमेजनको सब भन्दा पुरानो भागलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, यो ढाँचा अवस्थित रहन्छ र अमेजनले यसको इरिडरहरूमा समर्थन गर्न जारी राख्दछ। निस्सन्देह, केवल ढाँचा जुन DRM-free छ, अमेजनले निर्दिष्ट गरे अनुसार। अझै डीआरएम-मुक्त मोबीसँग सुरक्षाका धेरै तहहरू छन् जबदेखि कम्पनी मोबिपकेटले उनीहरूले सिर्जना गरेको दोस्रो ईबुक ढाँचा प्रतिनिधित्व गर्‍यो।
ती प्रारूपहरु मध्ये पहिलो अमेजन कम्पनी को खरीद संग अधिग्रहण र यो कि यो आफ्नो पाठकहरु लाई प्रसारण छ prc प्रारूप हो। प्रिसी एक साधारण प्रारूप हो जुन मोबी ढाँचासँग मिल्दोजुल्दो छ तर यसको सुरक्षा तह बिना नै, जसले गर्दा हाल मोबि ढाँचा पढ्ने सबै पाठकहरूले प्राय: प्रिसी प्रारूप पढ्न सक्दछन्। यस ढाँचामा ईबुकहरू देख्न धेरै विरलै देखिन्छ, कम्तिमा सब भन्दा हालकोलाई, तर जहाँ किन्डल क्याटलगको कुनै व्यवस्थित रूपान्तरण छैन, कमसेकम पुरानो ईबुक पढ्नका लागि पाठकहरुमा यो पुरानो ढाँचा राख्नु आवश्यक छ।
यसको ढाँचाको अतिरिक्त, किन्डलले गैर-अमेजन-द्वारा स्वामित्व प्राप्त GPL अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त अन्य ढाँचाहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ। यी ढाँचा मध्ये, पीडीएफ अलग, एक फाइल ढाँचा कि आफैमा एक ebook प्रारूप छैन, तर फाइल को एक प्रकार हो कि पढ्न को लागी धेरै राम्रो काम गर्दछ। Pdf एडोब सम्बन्धित छ र यसको एक्रोनिम, पोर्टेबल कागजात फर्म्याट, यसको उत्तम सुविधा, पोर्टेबिलिटीलाई जनाउँछ। यद्यपि एडोब यस ढाँचाको मुख्य विकासकर्ता हो, २०० 2008 मा यसले यसलाई जारी गर्‍यो र मानककरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको हिस्सा भयो, जुन खुला ढाँचा बन्यो। यसले दुबै पिडिएफ ढाँचा बनायो र यसको पोर्टेबिलिटीले अमेजन ई आरिडर्समा धेरै राम्रोसँग काम गर्यो, जबकि स्क्रिन साइज, हाल currently .9,7 भन्दा कम छ ", यसले केही व्यक्तिलाई पढ्न गाह्रो बनाउँदछ। सुरुमा यसलाई ठूलो किन्डल, प्रख्यात किन्डल डीएक्सको सिर्जनासँगै सुल्झाउने प्रयास गरिएको थियो, तर यो eReader चाँडै वैकल्पिक विधिहरूको खोजीमा छोडियो जुन pdf कागजातलाई Epub ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने वा pdf लाई आकारको आकारमा अनुकूलन गर्ने। पर्दा।
किन्डल पनि यो txt वा Html जस्ता पुरानो ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्न सक्षम छ। ती मध्ये पहिलो, txt सरलतम ढाँचा हो जुन कम्प्युटर संसारमा अवस्थित छ। हामी मध्ये धेरैले यो ढाँचाका साथ काम गरेका छौं, यो विन्डोज नोटप्याडले बनाएको ढाँचा हो, तर हाल यस ढाँचामा पुस्तकको रूपमा कागजात पढ्नु कठिन कार्य हो किनकि यस ढाँचाले आधारभूत सम्पादन विकल्पहरू वा पाठ रूपरेखालाई मान्यता दिदैन।
HTML को दोस्रो ढाँचा वेबमा प्रयोग गरिएको ढाँचा हो र कुनै पनि ब्राउजरले पढ्न सक्छ। यस भाषाको हालै पाँच संस्करणहरू छन्। किन्डल ईरिडरहरू केवल पहिलो चार ढाँचाहरू पढ्न सक्षम छन्, अन्तिम एउटा, एचटीएमएल 5, आंशिक रूपमा चिन्न सक्षम छ, किनकि यसको मानकीकरण हालसालै भएको छ। यद्यपि यो txt भन्दा अधिक यौगिक ढाँचा हो, html ebooks पढ्नको लागि आदर्श ढाँचा होईन। यो ढाँचा पढनाले हामीलाई हाम्रो किन्डलमा वेब पृष्ठहरू हेर्न र अमेजनले तिनीहरूका उपकरणहरूमा परिचय गराएको आधारभूत ब्राउजर मार्फत नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ। जे होस्, यसले हामीलाई कागजातहरू पढ्न अनुमति दिदैन जुन अन्य वेब टेक्नोलोजीमा फ्ल्यास वा जाभास्क्रिप्टका केहि पक्षहरूमा सम्मिलित छन्।
भर्खरको किन्डल पाठकहरूले कागजात र डक्स फर्म्याटहरू पढ्न समाहित गरेयी ढाँचाहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड द्वारा उत्पादित हुन् र txt मा सिर्जना गरिएको ebooks का वास्तविक विकल्प हो। Txt भन्दा फरक, कागजात र कागजात कागजातहरू हामीलाई पढ्नको लागि सम्पादन र प्रिमरेटेड पुस्तक राख्न अनुमति दिन्छ। तर यी दुई ढाँचा या त ebooks हुन अभिप्रेरित छैनन्, त्यसैले तिनीहरूको प्रयोग कुनै पनि पाठक मा केहि कम त्रुटिहरू छ। ती कमजोरीहरू मध्ये एक फाईल आकारमा छ। यदि हामी AZW र AZW3 ढाँचाका साथ ebooks को आकार मा हेर्छौं, यो धेरै ठूलो छैन, यो प्राय: मुश्किलले दुई मेगाबाइट भन्दा बढी गर्छ, तथापि, डक वा डॉक्स ढाँचामा एउटा ebook ले times गुणा बढी लिन सक्दछ, अझ गाह्रो छ। किन्डल द्वारा प्रबन्ध र प्रयोग गर्नुहोस्।
इलेक्ट्रोनिक मसी ईरिडर्स, कि किन्डलले पनि छविहरू पुनरुत्पादित गर्न सक्दछ, यद्यपि तिनीहरू रंगमा छैनन्, यदि विरोधाभास र टोनलिटीमा भएको परिवर्तनलाई सराहना गर्न सकिन्छ। यो भर्खरको किन्डलमा, जसमा भर्खरको इलेक्ट्रोनिक ईंक स्क्रिन टेक्नोलोजी छ र उच्च रिजोलुसन पनि छ, धेरै प्रशंसनीय छ। यदि हामी केण्डल फायरमा देख्न चाहन्छौं भने माथीका साथै थप हामीसँग छविहरू र theमा देख्ने अवसर छ। छवि प्रारूपहरू धेरै र विविध छन्, तर कुनै किन्डलले सबै ढाँचाहरू पढ्न सक्दैनन्। यसको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि अमेजनले ध्यान लिएको छ त्यसैले यसका पाठकहरूले छविहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय ढाँचाहरू पढ्न सक्दछन्। यसैले, छवि प्रारूपहरू जुन यसले समर्थन गर्दछ jpg, png, bmp, gif हो।
किन्डल फायरले पढ्न सक्ने ईबुक स्वरूपहरू
को आगो आगो को रूपमा मान्न सकिन्छ किन्डल पाठकहरूको दोस्रो वर्ग यद्यपि कसैले तिनीहरूलाई त्यस्तो बोलाउँदैन। किन्डल फायर परिवारको उपकरणहरूको प्रकृति ट्याब्लेटको हो, यद्यपि यसको सफ्टवेयर एकदम पठनको लागि धेरै उन्मुख छ, यति धेरै कि अवस्थित उपकरणहरूको स्क्रीनहरूको आकार पनि दिनको लागि छनौट गरिएको छ। पढ्दा ठूलो सान्त्वना।
किन्डल फायरले आफ्नो मुटुमा अमेजनले नै अनुकूलित एन्ड्रोइडको एक संस्करणलाई बोक्दछ, यस्तो अपरेटिंग सिस्टमलाई फायरओएस भनिन्छ। सामान्यतया, यो भन्न सकिन्छ कि ट्याब्लेट हुनु र एन्ड्रोइड भएको, किन्डल फायरले कुनै ढाँचा समर्थन गर्न सक्दछ, जे होस्, पहिलो मोडलको अमेजनले प्ले स्टोरबाट कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्षम भएको छ, त्यसैले हामी केवल ढाँचाहरू पढ्न सक्छौं जुन बताउँछ हामीलाई अमेजन अमेजनसम्म हामी अमेजन सफ्टवेयरको साथ छेडछाड गर्दैनौं।
सुरुमा, हामी हाम्रो किन्डल फायर खरीद्यौं र यसलाई खोल्दा, हामी माथि वर्णन गरिसकेका कुनै पनि ईबुक ढाँचाहरू पढ्न सक्दछौं, तर हामी अन्य मल्टिमेडिया ढाँचाहरू पनि पढ्न सक्छौं जुन तिनीहरू ईबुकसँग सम्बन्धित छैनन्, ती हुन्। अन्तर्क्रियात्मक ebooks को प्रयोग गर्दा थाहा पाउन ठूलो मद्दत।
हालका महिनाहरूमा, अमेजनले आफ्नो ईकोसिस्टममा श्रव्य सेवा थप गरेको छ। यसले उपकरणहरू बनाएको छ कि एक गैर-इलेक्ट्रोनिक ईंक स्क्रीन अडियो ढाँचा प्ले गर्न सक्षम छ, विशेष गरी श्रव्य अनुप्रयोगको ढाँचाहरू, जुन aax हो।
श्रव्य प्रारूप अमेजनले प्रस्तुत गरेको नयाँ ढाँचा मध्ये एक हो lcd स्क्रीन वा रंग स्क्रीन संग आफ्नो उपकरणहरूमा। यी उपकरणहरू ईरिडरहरू भन्दा शक्तिशाली छन्, जसको अर्थ हो कि उनीहरूले ठूलो संख्यामा ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्न सक्दछन्, केवल ती मात्र ईबुकका लागि ज्ञात छैन तर अन्य ढाँचाहरू जसले हामीलाई भिडियो, अडियो र अधिक पूर्ण वेब ब्राउजि toमा पहुँच दिन्छ।
भिडियो स्वरूपहरू बीच, mkv र mp4 अलग देखिन्छ, यद्यपि उनीहरूले3जीपी र वीपी 8 (वेबएम) पनि पढ्छन्। अडियो प्रारूपहरूमा, ए्याक्स स्वरूपका साथै, तिनीहरू एमपी they फाईल, OGG फाईल, एक नि: शुल्क अडियो ढाँचा पनि खेल्न सक्षम छन् जुन mp3 र क्लासिक फाईलहरू WAV विस्तारको साथ बराबर हुन सक्छ।
हामीले अघि नै भनेजैं, हामी किन्डल फायरको सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न सक्दछौं, या त एपीके मार्फत अनुप्रयोगहरू थप गरेर वा ट्याब्लेट ह्याक गरेर। दोस्रो केसमा, ग्यारेन्टीका लागि अमेजन जिम्मेवार छैन, त्यसैले इपब ढाँचामा ईबुक पढ्नको लागि यो सिफारिस गरिएको छैन, तर पहिलो केसमा यो गर्न सकिन्छ र यसले हामीलाई नयाँ ई-बुक ढाँचाहरू थप्न अनुमति दिनेछ। जस्तै ढाँचा Epub। यो हाम्रो किन्डल फायरले चिन्न सक्छ यदि हामी एल्डिको वा FbReader जस्ता अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्दछौं। यी अनुप्रयोगहरू गुगल स्टोरमा फेला पार्न सकिन्छ, अमेजन स्टोरमा र उनीहरूको वेबसाइटमा पनि, त्यसैले प्राप्त गर्न सजिलो छ र स्थापना गर्न सजिलो छ। एक पटक अनुप्रयोग फेला पर्‍यो, हामी यो ट्याब्लेटमा बचत गर्दछौं र "अज्ञात स्रोतहरूबाट स्थापना गर्नुहोस्" विकल्प मार्क गर्दछौं जसले हामीलाई चाहेको कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्न अनुमति दिनेछ।
यी मोटामोटी हो किन्डल स्वरूपहरू कि अमेजन ईरिडर्स समर्थन गर्दछ र म मोटा मोटा कुरा गर्दछु किनकि हामी धेरै प्राविधिक विवरणमा गएको छैनौं जुन औसत पाठकलाई मात्र भ्रमित गर्दछ जसले केवल जान्न खोज्छ कि उसले पहिले नै किन्डलमा रहेको ईबुकहरू पढ्न सक्छ वा सक्दैन।
हामी आशा गर्दछौं कि यस सबै जानकारीको साथ तपाईले पहिल्यै सफा गर्यौं के प्रारूपहरू किन्डलले पढ्छन् यद्यपि तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् भने, हामीलाई एक टिप्पणी दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै ईरेडरहरू » कम्पनीहरु » अमेजन Kindle » किन्डल फर्म्याट, एमेक्सन रिडरमा के ई-पुस्तकहरू तपाईं खोल्न सक्नुहुन्छ?
कुनै ePub छैन?
कुनै eReader छैन
L0ck0 लाई जवाफ दिनुहोस्
नाचो मोराटा भन्यो
हाहाहा, संक्षिप्त लेखहरू तपाईको कुनै प्रतिद्वन्द्वी छैन
Nacho Morató लाई जवाफ दिनुहोस्
मिकीज १ भन्यो
मसँग बल्को आगो छ र हैन। पढ्न म दृढ छु। गम्भीरतापूर्वक, यो अनौंठो प्रकारको हो। म एनबीए खेल्न र भिडियोहरू हेर्न र सर्फ गर्न घण्टा खर्च गर्न सक्दछु तर यो पुस्तक पढिरहेको छ र चमकले मलाई धेरै सताउँछ। मलाई थाहा छैन किन पढ्ने हो यदि यसले मलाई दु: ख दिन्छ र बाँकीका लागि यति धेरै होइन तर यो त्यस्तो हो। पढ्नको लागि म मेरो पेपरहाइटबाट इलेक्ट्रोनिक मसीलाई प्राथमिकता दिन्छु।
Mikij1 लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाई गम्भीरताका साथ ePub पढ्नुहुन्न?
कि म किन्डल पेपरहाइट किन्नको लागि उत्सुक छु, किनकि मैले पढें कि यसले अब GB जीबी स्पेस ल्याउँछ। त्यसोभए तपाईं थप ईबुकहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एक परिचितले मलाई भने कि यो गर्न सक्दछ तर म चाहान्छु कि कसैले पेपरवाइटमा ePubs पढ्न सम्भव छ भने मलाई भन।
जसरी भिक्टोरियोले क्यालिबर प्रोग्रामसँग भनेका छन, तपाइँ एक मिनेट भन्दा धेरैमा एक ढाँचाबाट अर्कोमा जान सक्नुहुनेछ, त्यसैले यदि तपाइँ एक किन्डलमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, उनीहरूलाई ePub नपढाउनु कुनै बाधा होईन। मसँग एक पेपरहाइट छ र म डाउनलोड गर्ने सबै पुस्तकहरू ePub मा छन् र मलाई मेरो eReader मा पढ्न सक्षम हुन कुनै समस्या भएन किनकि मैले तिनीहरूलाई AZW3 मा ट्रान्सफर गर्नु अघि परिवर्तन गर्दछ।
क्यालिबरले कुनै पनि डिजिटल पुस्तक ढाँचा रूपान्तरण र सम्पादन गर्दछ, मसँग ट्याब्लेट छ जुन इपब र एक किन्डल छ जुन एजेडब्ल्यू reads पढ्छ, यस कार्यक्रमको साथ म एक समस्याबाट अर्को ढाँचामा जान्छु।
भिक्टोरियोलाई जवाफ दिनुहोस्
मा। जोसेप भन्यो
नमस्ते, मैले भर्खरै मेरो क्यालिबरलाई कम गरें र म DRM को कारणले AZW3 ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्दिन
कृपया, म के गर्न सक्छु?
मा जोसपलाई जवाफ दिनुहोस्
पेड्रो जोस भन्यो
जेलब्रेकको प्रयोग गरेर र कूलरेडर स्थापना गर्दै तपाईंले चाहानु भएको कुनै पनि ढाँचा पढ्न सक्नुहुन्छ
पेड्रो जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
डानिएला र पेद्रो जोस, तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले ल्यापटप किन्न र किन्नको लागि बिक्री गरें, त्यसो गर्दा यसले मेरो अनुहारबाट पढ्न कष्टकर बनाउनेछ।
पेद्रो जोस, म JB कागजको पछिल्लो संस्करणको साथ बनाउन सक्नुहुन्छ? यसको लागि कुनै सल्लाह छ?
मसँग २ बर्षको लागि पेपरहाइट छ र यसमा फाइदा र विपक्षहरू छन्। एक ereader को रूप मा, यो पढ्न को लागी आदर्श हो। यो धेरै राम्रो गरी सकेको छ र सामान्य भावना राम्रो छ। त्यसले भन्यो कि त्यहाँ त्यस्ता चीजहरू छन् जुन राम्ररी चलेको छैन। उदाहरण को लागी, बारहमासी प्रयोगात्मक ब्राउजर paltry गुणवत्ता को छ। अनुवादक छनौट गर्न सकिँदैन, यदि तपाइँ बिंग ट्रान्सलेटर राम्रो मन पराउनुहुन्छ, यदि होईन भने, तपाइँ यो संग राख्नु पर्छ। यसले कुनै पनि प्रायद्वीपी भाषाहरू जस्तै कातालान, बास्क, आदि समावेश गर्दैन।
Zorak लाई जवाफ दिनुहोस्
जर्ज कार्लोस, गुगल द्वारा खोज, यो धेरै सरल छ
मैले पहिले नै किन्डल पेपरहाइट र सामसु Note नोट between बीचमा श doub्का गरें।
नोटको फाइदा यो छ कि योसँग अधिक क्षमता छ र अन्य चीजहरू गर्न सक्दछ। प्रश्न यो छ कि यो राम्रोसँग यसको पढ्ने मोडको साथ कसरी पढ्छ।
मसँग एउटा प्रश्न छ ... मसँग एमेजोनमा पहिले नै अपलोड गरिएको पुस्तक छ, ​​यसमा अनुच्छेदहरू (शब्द प्रयोग गरेर) बीच छविहरू छन् र सत्य यो हो कि तिनीहरूलाई पigned्क्तिबद्ध राख्नका लागि मैले उनीहरूलाई असुविधाहरू भोगेका थिए र तिनीहरूको स्थानमा उनीहरू हुनुपर्दछ। त्यस्तै, जब मैले यो अमेजनमा अपलोड गरेको छु, यति धेरै कि मैले मेरो पुस्तकबाट छविहरू हटाउने निर्णय गरें, जुन मलाई धेरै चिन्ताको कारण भएको छ। तपाईं यसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यबाद
मैले भर्खरै किन्डलबाट शुरू गरेको थिएँ र मैले राखेका पुस्तकहरू कतै देखाइएको छैन। म पागल भर्इराछु!!!!!!
जोसेफालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, म एक दोस्रो हात चौंथो जेनरेशन किन्डल पाउन सक्छु। यो दिईएकोले, म जान्न चाहन्छु कि किन्डल एज्डब्लू4ढाँचा वास्तवमै पछाडि संगत छ।
यो हुन्छ कि चौथो जेनरेशन उपकरणले केवल एजेड्युक प्रारूपलाई समर्थन गर्दछ र मलाई थाहा छैन यदि त्यसमा azw3 ढाँचा फंक्शनल हुनेछ। धन्यवाद
नमस्ते, मैले पीसीको लागि किन्डल डाउनलोड गरें र पहिलो दिन मैले पढें र यो आश्चर्यजनक ढ worked्गले काम गरे तर त्यसपछि यो इनिसियलाइज गर्न चाहँदैन, यो त्यहाँ आरम्भमा रहन्छ। के छ? म के गर्न सक्छु । मसँग विन्डोज १० छ र मसँग bit 10 बिट र bit 34 बिट क्यालिबर छ। इपिप पढ्न पनि।
जेनीलाई जवाफ दिनुहोस्